Androhibe: hapetraka ny toera-pitiliana ny areti-mifindra | NewsMada
Androhibe: hapetraka ny toera-pitiliana ny areti-mifindra
Hitokana amin’ny toerana iray ny fanaovana fitiliana momba ny areti-mifindra rehetra. Ho arifomba ny laboratoara apetraka amin’izany hahafahana manatsara ny tontolon’ny fahasalamana.
Nitsidika ny ivontoerana vaovao ametrahana ny laboratoara hitiliana ireo karazana areti-mifindra ny delegasiona notarihin’ny Pr Rantomalala Harinirina Yoël, minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny alatsinainy teo. Nijery akaiky ny fizotry ny asa sy ny fanatsarana tokony hatao hampandehanana ity ivontoerana ity, araka ny tokony ho izy, haingana izy ireo tamin’izany.
Havondrona ao amin’io ivontoerana io, na “Institut National de Recherche en Santé Publique” eny Androhibe ny laboratoara sy ny sampandraharaha misahana ny areti-mifindra toy ny raboka, ny VIH/Sida ary ny pesta.
Tombony ho an’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ny fametrahana azy ireo amin’ny toerana iray ho fanatsarana ny fikarohana ny fisorohana sy ny fifehezana ireo aretina ireo. Fitaovana avo lenta no ho ampiasaina, ary afaka hifanampy amin’ireo laboratoara hafa eto an-toerana izany.
Marihina fa firenena maro no efa manana “ Center for Disease Control and Prevention (CDC) ” na “Centre pour le Contrôle et la Prévention des Maladies” izay misahana ny fanaraha-maso akaiky ireo karazan’areti-mifindra ireo. Hisitraka izany fotodrafitrasa izany ihany koa isika eto Madagasikara.
Raha ny eto Madagasikara, mbola mamely ny areti-mifindra ary anisan’izany ny pesta izay efa mahatratra 38 ny nararin’izany tamin’ity taona ity. Eo koa ny raboka izay mbola mahavoa ny olona sasany, indrindra ireo marefo ara-tsakafo sy manao asa mafy tsy mifanaraka amin’ny tanjaka. Ankoatra izany ny VIH/Sida izay somary nangingina, taona maromaro izay.